Iimpawu kunye neendawo eziqhelekileyo iqabane umphefumlo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Iimpawu kunye neendawo eziqhelekileyo iqabane umphefumlo
Xa ngokuphinda le mfundiso, naye umphefumlo, nto leyo eye wakha ulwalamano olunzulu wadibana ixesha ngalinye Kakade ithuba omkhulu ukuba ukho kweli hlabathi. Sahlukana ndadibana eninzi yabantu, kodwa nto ukuba Bakhathazekile ukuba ingaba kukho amaqabane umphefumlo kulo.
xa sihlangana iqabane umphefumlo, uthi izinto ukukhumbula ngengqiqo ukuba ngokungafaniyo nabanye abantu. Ukuba ngaba uthwebula iimpawu 'indlela, kusenokwenzeka ukuba bubasithele iqabane umphefumlo engxakini enkulu nayo.
ke eli xesha, ndiye ndazama kuquka iimpawu kunye iingongoma eziqhelekileyo yiva iqabane umphefumlo. Ukuba khumbula oku, uya kukwazi ukuba nditsale ukubamba intlanganiso neqabane umphefumlo.
iimpawu kwincopho eqhelekileyo nokuva kwazo kukho iqabane umphefumlo? Xa
liye laqhubeka iqabane umphefumlo kwemalike, kukho ezininzi kweyela ingqiqo eyahlukileyo. Loo mvakalelo yinto uziva ngazo xa badibana iqabane umphefumlo. Makhe sihlolisise imixholo yazo.
? abantu inkxaso kuvela xa kufuneka
umzekelo, Eme zaguquka ebomini bakho, ukuze ubunzima Yintoni Fumo indlela. Loo ixesha into efunekayo abantu inkxaso umfutho. Inkxaso kunye nomntu owenza umfutho kungenzeka ukuba abe liqabane umphefumlo. Kwelinye icala, ezifana xa kungekho inkathazo yonke uza kakuhle, ngamanye amaxesha ukuba bangezi kucingwa ukuba akukho nkxaso mfuneko amaqabane komphefumlo.
? Xa baphathwa ukuba kukho
iqabane umphefumlo into uziva kwintlanganiso yokuqala, okanye khumbula imvakalelo, ezifana ekhoyo uya kusuka kwintlanganiso yokuqala kweqonga, nezaziwa okanye kukho abo ukuba kuza isikhonkwane. Kwakhona, ngokuba akukho Ndivakalelwa ndadibana okokuqala, oko yenye iimpawu ixesha ndidibana naye umphefumlo. E wam, ukuba ndithe khumbula ngengqiqo ukuba ngokungafaniyo ixesha lokudibana nabanye abantu, loo mntu ukuze iqabane umphefumlo. _x00 0D_
? nangona ukuba akukho sizathu ethile
kunokuba noxolo lwengqondo bakunye, thile uxolo lwengqondo yaye lo mntu, ndicinga Akwaba kuqhubeka yonke indlela eli xesha, ndicinga ukuba nje. A iqabane umphefumlo uliqabane baye bachitha ixesha enye qho kwakhona kweli hlabathi kumaxesha amandulo. Ngenxa yesi sizathu, i-isizathu ingqondo ezolileyo kwaye kunye hayi, ngoko ke khumbula ingqiqo ukhuseleko. Xa
? amagama zichithwa nangomphefumlo
umlingane imvakalelo ibonakala ngaphandle, nokuba akukho lizwi iza iimvakalelo elinye iqela. Ngenxa yokuba Kizuke uxhulumaniso nzulu ngokunxulumene nenye bathanda ngomphefumlo, amagama akufuneki. Ukongeza, ekubeni wazitshintshela akukho mfuneko ukuzama ukufunda ingqondo ezingqondweni, nathi sinokuba kwi yokuma yendalo ngaphandle engenakwenzeka.
? iingcinga kunye
ephawula ukuba unxaxho awufumaneki intshukumo kuhlala zithanda ukuba kunye, ngaba iqabane umphefumlo ankcitho kakuhle ngaphandle kwezinye kwamaza sizathu shift kunye nokuziphatha abanokucinga ngazo omnye komnye. Xa Do kwamaza kufanelekile na imvakalelo yam, elinye iqela ninge wacinga njalo. Mhlawumbi oko kwelinye icala elinye, kukuba omnye ziviwa bekhululekile.
Umntu onjalo usondele Akumangalisi ukuba khona
ngentla, siye sikunike ye neengongoma eziqhelekileyo yiva iqabane umphefumlo. Kodwa ubengazi kude kube ngoku, ndicinga ukuba elinye iqela babevakalelwa ngale ndlela akuthethi ukuba kufuneka ukuba uvale nje mhlawumbi. Ukuba ungaphoswa ukuba imvakalelo, makhe uyamthanda yaye ubudlelwane kunye nomnye umntu.
, Ngoko ke khumbula imvo ukhuseleko. Xa
Izandla kucinga ngolo hlobo. Mhlawumbi oko kwelinye icala elinye, kukuba omnye ziviwa bekhululekile.